शनिबारमात्रै ७५ जनामा कोरोना पुष्टि, संक्रमितको संख्या ५९१ पुग्यो – Khabar Silo
१० जेठ, काठमाडौं । नेपालमा शनिबार मात्रै ७५ जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-१९ पुष्टि भएको छ । योसँगै संक्रमितको संख्या ५९१ पुगेको छ ।
शनिबार मध्याह्न ३२ जना, दिउँसो ३६ र राति ७ जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
शनिबार सबैभन्दा धेरै बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकामा २७ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । योसँगै नरैनापुरमा मात्रै कोरोना संक्रमितको संख्या ११२ पुगेको छ ।
यस्तै, बर्दियामा, झापा, गुल्मी, बारा, चितवन र काठमाडौंमा पनि एक/एक जना संक्रमित भेटिएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले जानकारी दिए ।
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पछिल्लो २४ घण्टामा ४३४ जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण भएको जानकारी दिएको छ । बिहीबार आयोजित मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले पछिल्लो २४ घण्टामा ४३४ जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको जानकारी दिए । जसमध्ये ३८६ पुरुष र ४८ जना महिला रहेका छन् । उनकाअनुसार नयाँ संक्रमित हुनेहरुमा झापाका […]
Posted on May 28, 2021 May 28, 2021 Author khabar silo
काठमाडौं । आगामी जेठ १८ गतेदेखि सीमित मात्रामा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु खुल्ला गर्ने नेपाल सरकारले निर्णय गरेको छ । हिजो बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले आगामी जेठ १८ गतेबाट चीन, युरोपको टर्की र खाडी मुलुकको कतारमा उडान खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको हो । उल्लेखित देशहरुमा साताको एक दिन उडान हुनेछन् । बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषदको बैंठकले तीन मुलुकमा […]